Matambudziko neTestFlight zvinongedzo pane macOS? Ita izvi | Ndinobva mac
Matambudziko neTestFlight zvinongedzo pane macOS? Ita izvi
Kwayedza svondo rino Apple yakaburitsa TestFlight iyo inobvumira vanogadzira kuti vape zviri nyore beta vhezheni dzemashandisirwo avo kuvashandisi vari kunze kweApp Store. Vamwe vashandisi vakataura kuti vane matambudziko nehukama hweichi chishandiso mu macOS. Saka kana iri nyaya yako, tinokurudzira dzimwe mhinduro Zvinotaridza kuti vazhinji veavo vanokanganiswa vari kushanda.
Apple ichangobva kuburitsa TestFlight. Kusvika nanhasi ichiri muchikamu che beta uye ndosaka zvakajairika kuti kune zvimwe zvinokundikana. Imwe yeanozivikanwa zvakanyanya maererano nevazhinji vashandisi ndeye iyo kusakwanisa kuvhura zvinongedzo kubva macOS. Nenzira iyi kukwanisa kushanda nechishandiso kunoshaya basa. Vashandisi vamwechete uye vagadziri vanga vachitsvaga uye vauya nemimwe mhinduro dzinoshanda, zvirinani izvozvi.
Tichifunga kuti sezvatakataura, chirongwa muchikamu che beta, izvo zvinoshanda nhasi zvinogona kusashanda mangwana, asi parizvino zvakanaka kuti isu tigadzirise mhinduro padhuze.
Dzimwe nguva chirongwa cheTestFlight hachivhure pavanodzvanya chinongedzo mukukoka kweTestFlight, saka havagone kurodha pasi nekuisa iyo beta app. Iyo yepasirose yekubatanidza, inova nebasa rekudzoreredza vashandisi kune imwe application, ichiri kusashanda nemazvo yeTestFlight, nekudaro, kudzvanya iyi link hakuite chiitiko chinotarisirwa.
Kana iwe usingakwanise kuvhura yeruzhinji TestFlight zvinongedzo paMacOS Monterey, unogona kuraira-kudhonza iyo URL kubva kuS Safari kero bar uye ndokukanda muTestFlight icon muDock (zvinoita sekunge Universal Link iri kuparadzira zvishoma nezvishoma izvozvi) Thanks @strongingtonsmith yezano!
- Guilherme Rambo (@_inside) August 26, 2021
Batisisa kiyi yekuraira uye dhonza iyo URL kubva pakero yekero yeSafari kuenda kuTestFlight icon muDock. Izvi zvinofanirwa kuita kuti iyo application izive yekukoka chinongedzo.
Kopa iyo yekukoka chinongedzo kuTestFligh. Namatira chinongedzo mubhawa rekero reSafari. Tsiva "https" ne "itms-beta" pinda Enter
Kusvika tamirira mhinduro yaApple, izvi zvichauya zvinobatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Matambudziko neTestFlight zvinongedzo pane macOS? Ita izvi
Microsoft Defender ye macOS, inowirirana inowirirana neM1 processor
Kuseri kwezviitiko zvemwaka wechipiri wekuona